Guddiyada Kaydsan - Wadashaqaynta Tucson Pima si loo Joojiyo Hoy La'aanta
TPCH waxay dib-u-waafajisay qaab-dhismeedkeeda maamul iyo guddiyada 2020 iyada oo qayb ka ah dadaalka bulshada si loo hagaajiyo waxtarka nidaamka isla markaana loo dardar-geliyo hadafkeenna wadaagga ah ee xubnaheenna ee ka-hortagga iyo joojinta hoy la'aanta ee Tucson iyo dhammaan Degmada Pima, Arizona.
Dib-u-habeyntaas awgeed, dhowr guddi oo ka tirsan TPCH ayaa la kala diray. Dukumiintiyada iyo qalabka loogu talagalay guddiyada la kala diray ayaa lagu keydiyay hoosta waxaana loo heli karaa kormeerka dadweynaha.
Sii wadista howlaha guddiga
Gudiga Maamulka iyo Qorsheynta
Guddiga Qiimaynta & Korjoogteynta
Guddi hoosaadka Xalinta Degdega ah
Riix halkan isbahaysiga bulshada ee wax ka qabanaya hoyga degdegga ah, ka hortagga hoy la'aanta, iyo barnaamijyada fidinta.
Guddi hoosaad dhalinyaro oo hoy la’aan ah
Riix halkan si aan wax badan uga barto Isbahaysiga Dhallinyarada Guri la'aanta ah.
Guddi hoosaadka Isuduwaha gaarsiinta
Riix halkan wixii macluumaad ah ee ku saabsan Isbahaysiga Isgaadhsiinta TPCH.
Mid ku cusub Basecamp?
Basecamp waxay siisaa kulan xubnaha isbahaysiga ay si toos ah ugula xiriiraan una wadaagaan macluumaadka waqtiga dhabta ah. Tabobar kooban oo ku saabsan Basecamp, fiiri qoraalkan kooban barashada fiidiyaha.